Izindaba - Mayelana namathiphu we-laboratory pipette, kufanele wazi.
1. Sebenzisa ithiphu efanelekayo:
Ukuze kuqinisekiswe ukunemba okungcono nokunemba okungcono, kunconywa ukuthi ivolumu yamapayipi ibe sebangeni lama-35% -100% wethiphu.
2. Ukufakwa kwamathiphu we-pipette:
Kumikhiqizo eminingi yamapayipi, ikakhulukazi amapayipi eziteshi eziningi, akulula ukufaka ithiphu yepipette: ukuze uphishekele uphawu oluhle, udinga ukufaka isibambo semikhono sepipette kuthiphu yepipette bese usijikisa kwesobunxele nangakwesokudla emuva naphambili ukuyiqinisa ngamandla.
Kukhona nabantu abasebenzisa i-pipette ukushaya iphimbo kaninginingi ukuze baqinise, kepha lo msebenzi uzokwenza ukuthi ithiphu likhubazeke futhi lithinte ukunemba, futhi lilimaze kakhulu i-pipette, ngakho-ke imisebenzi enjalo kufanele igwenywe. IPIPette yeziteshi eziningi zikaRAIN ayinayo i-O-ring, futhi ifaniswa nethiphu nephoyinti lokumisa langaphambili. Ingafinyelela uphawu oluhle ngomfutho owodwa nje wokukhanya, okuyizindaba ezimnandi kubasebenzisi bamapayipi amaningi eziteshi.
3. Ukutsheka nokucwiliswa kwethiphu:
Ukuthambekela kokucwiliswa kwethiphu kulawulwa ngaphakathi kwamadigri angama-20 wokuthambekela, futhi kungcono ukukugcina kumile; ukujula kwethiphu kunconywa ngale ndlela elandelayo:
Ukucaciswa kwepipette ithiphu yokucwiliswa kwethiphu:
2μL no-10μL: 1 mm
I-20μL ne-100μL: 2-3 mm
I-200μL ne-1000μL: 3-6 mm
I-5000μL ne-10mL: 6-10 mm
Amathiphu we-pipette hlambulula:
Kwamasampula ekamelweni lokushisa, ukuhlanzwa kwethiphu kungasiza ekuthuthukiseni ukunemba; kepha ngamasampuli anezinga lokushisa eliphakeme noma eliphansi, ukuhlanzwa kwethiphu kuzonciphisa ukunemba kokusebenza. Sicela unake ngokukhethekile abasebenzisi.
Isivinini samapayipi amanzi:
Umsebenzi wepayipi kufanele ugcine ijubane elibushelelezi nelifanele lokushaya amapayipi; isivinini se-aspiration esisheshayo sizokwenza ukuthi isampula ingene emkhonweni, kubangele ukulimala kwepiston nophawu lwendandatho nokungcoliswa kwesampula.
1. Gcina isimo esifanele lapho ushaya ipayipi; ungabambi i-pipette ngokuqinile ngaso sonke isikhathi, sebenzisa i-pipette ene-hook yomunwe ukusiza ukukhulula ukukhathala kwesandla; shintsha izandla kaningi uma kungenzeka.
2. Hlola njalo isimo sokubekwa uphawu kwepayipi. Lapho kutholakala ukuthi uphawu luyaguga noma ukuvuza, indandatho yokubekwa uphawu kufanele ifakwe esikhundleni sayo ngesikhathi.
3. Linganisa i-pipette izikhathi ezingu-1-2 ngonyaka (kuya ngemvamisa yokusetshenziswa).
4. Kuma-pipette amaningi, ngaphambi kokusetshenziswa nangemva kwesikhathi sokusetshenziswa, i-piston kufanele ifakwe amafutha okugcoba ukugcina uphawu; nakuma-RAININ pipettes anebanga elijwayelekile, kubuye kube kuhle ngaphandle kokuthambisa. Ukuqina.